Senator Qodax oo afar sano kadib ku laabtay Hargeysa - Caasimada Online
Home Somaliland Senator Qodax oo afar sano kadib ku laabtay Hargeysa
Senator Qodax oo afar sano kadib ku laabtay Hargeysa
Hargeysa (Caasimada Online) – Magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Somaliland waxaa maanta gaaray Senator Mustafe Qodax oo ka tirsanaa mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, balse dhowaan iska casilay xilkaasi, kadibna cafis weydiistay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Mustafe Qodax oo ka soo amba-baxay magaalada Dubai ee dalka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa afar sano kadib, si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Hargeysa.
Xildhibaankan ayaa shaqada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isaga tegay, xilli uu dhammaad yahay muddo xileedka baarlamaanka labada aqal, wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay inuu dib ugu laabto Hargeysa oo ah magaaladii uu ku soo barbaaray.
“Aad ayaan u faraxsanahay, dareenkayga lama soo koobi karo, muddo afar sano iyo bil ah oo aan ka maqnaa magaaladii aan ku barbaaray magaaladaydii Hargeysa caasimaddii Somaliland, inaan kusoo noqdo oo la igu soo dhoweeyo aad ayaan ugu faraxsanahay ,bahda saxaafadda iyo bahdii goloyaasha ee isoo dhoweeyey,” ayuu yiri Mustafe Qodax.
Sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyey “Dubai ayaan joogay muddo bil a, xilkii aan ka haayey Soomaaliya halkaas ayaa iskaga casilay xaflad lagu qabtay, halkaas aniga oo jooga ayaan cafis ka soo dalbaday, sidii ayaan ku imid wixii dambe waan isaga imaanaynaa, maanta runtii aad ayaan ugu faraxsananahay,”.
Waa xildhibaankii labaad oo ka tirsanaa dowladda federaalka, islamarkaana 60 cisho gudahood cafis weydiista maamulka Somaliland, iyadoo bishii October ee sanadkan uu magaalada Hargeysa dib ugu laabtay Maxamed Cumar Carte oo horay u soo noqday ra’iisul wasaare ku xigeen iyo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.